Bannaanka qaybsan LED Screen
Bannaanka Service Front Screen LED
Gudaha go'an LED Screen
Screen kirada LED
Screen Custom LED
Sida loo doorto Power Sare LED Toosh?
LED noqday iyo aad u badan oo caan ah aagga Nuur, maxaa yeelay, keydinta tamarta, ayuu socon karaa saac ka badan ka yar awood la mid ah ku baabbi'iyee, sidaas oo kale aad u wanaagsan iftiinka flash waayo. Iyo sida loo doorto toosh wanaagsan waa walaaca ugu badan loogu talo galay dadka doonaya in ay iibsadaan toosh LED. 1. tiro LED: LED sh tirada ...
Taxadarka inta lagu guda jiro kaydinta LED iyo isticmaalka
LED waa qaybaha aad u xasaasi elektaroonik ah, sidaa darteed waa in aad uga taxadirtaa inta lagu guda jiro kaydinta iyo isticmaalka, haddii kale waxa keeni doonaa qoyan LED, dalool ama dhimasho. Iyo wax badan oo uu Kokes dhibaatada keliya waxaa laga heli karaa inta lagu guda jiro isticmaalka. Kaydinta: 1. Qoyaanka xirmo caddayn iyo anti-electrostatic qoyaan saaxiibkiisa nuugta ...
Waa maxay heerka helid iyo heerka jir?
Heerka helid waa tirada jeer image bandhigay ayaa kalareeyay ama nasiyey per labaad. Sida waxa ay ku tusinaysaa inta jeer ka mid ah geeddi-socodka ah, heerka helid la muujiyay in Hertz. Taasi waa, heerka helid 75 Hz macnaheedu image la nasiyey 75 jeer in mid ka mid ah labaad. Heerarka cusub ugu badan ee ay u ...
Waa maxay habka scan for Screen LED?
mode The iskaanka of bandhigay LED wareersan dad badan, waxa ee u shaqeeyaan? Iyo waxa ay taasi saameyn ku yeelan daaha LED? Halkan waxa aad ka siiso macluumaad faahfaahsan: drive kasta IC leeyihiin 16 biinanka, iyo eryi karaa 16 chip LED ugu badnaan. mode drive guurto ah waxay ka dhigan tahay oo dhan uu Kokes ku module ah LED yihiin by IC at t kasta oo ...
Masaafada daawashada si mug leh
Si mug leh (Fiicanna) waxaa meel fog la daawado ee shaashadda keentay waa fog daawashada bixinaya dhagaystayaasha leh waayo-aragnimo ugu fiican ee muuqaalka ah ee daawashada ah screen bandhigay hogaaminayo oo ma kabka midabka. Dhab ahaantii, waxa aad u adag tahay in this qeexo sababtoo ah waxaa jira arrimo badan oo saameyn ku, sida garoonka pixel ah, SC oo ...
Waa maxay arkaysid xagal?
Arkaysid xagal waa xagal ugu badan ee kaas oo soo bandhigay waxaa laga daawan karaa qaab muuqaal ah mid la aqbali karo. Waxaa ka mid ah xagal daawashada siman iyo xagal daawashada toosan. image The muuqan kara garbled, si liidata cokan, ee ka duwan oo liita, kharibi ama aad u itaal darnaayeen ka baxsan arkaysid kala duwan xagal sheegay, ka ...
sharaxaad ku saabsan ilaalinta ingress (egIP65)
Ingress Protection (IP) waa rating Yurub oo qeexaya heerka ilaalinta ay bixiyaan xero ah ee qalabka korontada. nidaamka rating wuxuu ka kooban yahay xarfaha IP ku xigga laba lambar: Tirada ugu horeysay waxay muujinaysaa heerka uu ka badbaado ingress shayga qalaad adag. T ...
Waa maxay farqiga u of smd oo dhex geliyaa?
Smd sidoo kale loo magacaabay SMT (dusha Jaha technology), laambad smd waa kabida dushiisa guddiga PCB ah. Smd bandhigay keentay waxaa si balaadhan looga isticmaalo mashaariic indoor. Hadda waxaa sidoo kale loo isticmaalaa mashaariic dibadeed. Our dibadda smd keentay qaab waa qaan gaar, caddayn ku filan IP65 biyo la baaro sano. Daraa (dual ...
Farqiyada u dhexeeya Ilo Light Display LED
il Iftiinka LED waa wax muhiim u ah waxqabadka bandhigay LED, taas oo go'aan ka joogta ah midabka, dhalaalka, arkaysid xagal iyo kharashka ee shaashadda. Halkan bandhigo farqiga u dhexeeya furta dhibic, waa inuu dhex geliyaa iyo il light smd LED. 1. Dot furta module: Waa design hore, ka INT ah waxaad fartaan Wannaagga ...
Oo waxaa calaamo adag tahay in la barnaamijka?
Ma aha at dhan. barnaamijyada ee Muujiya ugu waxaa loo sameeyaa iyadoo la isticmaalayo fog gacanta lagu a, computer ama gaar ah ma software ayaa loo baahan yahay. gacanta fog waa wax ku ool ah ilaa barnaamaj ama calaamad ka ilaa 25 fiid u edit. qaab Our isticmaali karaa fog ama noo fududahay in la isticmaalo software.
Sida loo Xakamee ku-color Full LED Tayada Display?
qaybaha LED waa qaybaha ugu muhiimsan ee midabka buuxa LED bandhigay. Sababta oo ah in, wanaajinta tayada qaybaha LED waa furaha in ay sameeyaan midab buuxa bandhigay wanaagsan LED. Waxaa jira shan tilmaamayaasha muhiim ah si ay u qiimeeyaan tayada qaybaha: 1) heerka gaabinta Sida comp bandhigay color full LED ...
Waa maxay caadadii LED bandhigay?
AeroV siin karaan design habka iyo soosaarka, si loo waafajiyo kala duwan codsiga-kartoo LED Muujiya, kaas oo loo qaabeeyay kartaa sida uu sheegay baahida loo qabo of user iyo ka fiirsaneysa inay dhinacyo kale si ay u si fudud loo hayo karo. Dabcan dayactirka caawisaa hagaajiyo nolosha equi elektarooniga ah ...
Cinwaanka 1-dii Floor, Block A2, Langxin Industrial Zone, Shiyan Street, Degmada Bao'an, Shenzhen, Shiinaha.
Boostada info@aerovtech.com overseas@aerovtech.com
© Copyright - 2016-2020: Dhamaan Reserved Rights.
Waterproof Led Screen, Indoor Led Video Wall, Seamless Led Video Wall, Led Display Billboard, Led Outdoor Advertising Board, Screen Display ay hogaaminayaan Video Wall boor ,